IMIGANGATHO YESHAWARI YOKUHLAMBA (IINKONZO KUNYE NENKCITHO KUNYE NEEYILO ZANGASESE) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Imigangatho yeshawari yokuhlamba (Iinkonzo kunye neNkcitho kunye neeYilo zangasese)
Nasi isikhokelo sethu kwi-teak floor ephantsi kubandakanya ukuba yintoni kwaye zilungile kwaye zilungile. I-teak ngumthi onzima owaziwayo owomeleleyo nowomeleleyo. Imithi etyiwayo inako ukumelana nobushushu obugqithisileyo kunye nengqele eyenza ukuba ibe lukhetho oluhle kakhulu lwenkuni ngaphandle; Ikwaqala ukuba lukhetho oluqhelekileyo lomthi oza kuwusebenzisa ngaphakathi.
Ukuqina kwayo kunye nobuninzi bayo beoyile kunye nerabha, kunegalelo elikhulu kwinto yokuba iinkuni ze-teak akunakulindeleka ukuba zichaphazeleke ukubola, okanye ezinye izinto ezininzi ezonakalisa ukhuni.
kutheni abantu bephosa irayisi emitshatweni
Umbala ofudumeleyo kunye nokutya okuziinkozo kwendalo zizinto ezenza ukuba ibe yenye yezona mithi zinomtsalane kubaqulunqi nakubanini bamakhaya.
Ezi zibonelelo zendalo zomthi we-teak njengokomelela kwawo, ukuqina kwawo, umbala, iipropathi ezinganyangekiyo ngamanzi, kunye notyekelo lokungaqhekeki ngokulula kwenza ukuba ibe ngumthi onokuziqhelanisa kakhulu kwaye lolunye lwezona zikhetho zibalaseleyo kwisitya sokuhlambela esityeni.
Yintoni iTeak Wood Shower Floors
Iinkonzo zoMgangatho weteak
Umgangatho weteak Shower kuMgangatho
Imigangatho yeshawari yeTeak Shower Q & A.
I-Teak Wood ihlala ixesha elingakanani kwiShower?
Yeyiphi engcono kwiShower Teak okanye kwi-Bamboo?
Yeyiphi eyona nto iphambili kuMgangatho wokuhlamba?
Xa ucwangcisa uyilo lwegumbi lokuhlambela, inye into ekufuneka ihlale ithathelwa ingqalelo ngononophelo ngumgangatho weshawa-emva kwayo yonke loo nto, umbono wokuba kufuneka sime entweni eya kuthoba kunye nokuphumla kweenyawo zethu.
Iishawa zomthi ezenziwe ngomthi ziyindlela entle yokuphucula, ukufudumeza igumbi lokuhlambela, ukuzola kunye nendlela entle yokuphatha umgangatho ngokwawo.
Ngenxa yomxholo weoli yomthi we-teak, yenza ukuba inyamezele ukufuma kunezinye iintlobo zomthi.
Imithi yetiki yenye yeendlela ezinokuthanani nomgangatho weshawa kuba inendawo engatyibilikiyo kwaye ifuna ukugcinwa kancinci nakwezona meko zisezantsi; iioyile zayo ezisisiseko zenza ukuba zinganyangeki kwifungus, ibhaktiriya, ukungunda kunye nokunye ukungcola.
Nangona kunjalo, sicebisa ukuba kwenziwe ucoceko lwesiqhelo kunye nokucoca okunzulu ubuncinci rhoqo kwiinyanga ezi-3 okanye xa ubona ukwakheka kwesepha.
Ngokukhangeleka kuyilo lwanamhlanje, imigangatho yeshawari yeenkuni ye-teak ilungile kuba indlela amanzi ayangena ngayo kwi-slats nakwipani enkulu yeshawari ngaphantsi; lo mgangatho weplanga we-teak uyayifihla imijelo yamanzi yenzela indlela yolwelo, ecekethekileyo kunye nengcaciso encinci.
Izitayile zomthi we-teak ezimnyama, ezityebileyo ezidityaniswe neethayile kunye nezinye izinto zomthi zenza indawo yoyilo nesibindi.
Umgangatho weshawari wethayile uhlala unyusa isibheno segumbi lokuhlambela ngenxa yoyilo lobugcisa. Umthi we teak unamandla amakhulu kunye nokuqina.
Ioyile yayo yendalo yenza ukuba imithi ye-teak inganyangeki ngamanzi kwaye ivumela lo mthi ukuba ubugcine ubuhle bawo kwiindawo ezifumileyo kwaye wenze ukuba kuthintelwe izinambuzane ezitya iinkuni.
Imigangatho yeshawari yokhuni lweti inokongeza ubushushu, imvakalelo ye-rustic kunye nomlinganiswa kwindawo yokuhlambela kwindawo yakho yokuhlambela kwaye unokukunika imvakalelo ethomalisayo kunye nehlaziyayo ezinyaweni zakho.
Ngelixa imithi ye-teak isabela kakuhle ukufuma, ihlala ikhawuleza ukuguga kwaye itshintshe umbala wayo ube ngumthunzi wesilivere engwevu kwiindawo ezifumileyo.
Nangona ukhuni lwe-teak luqukethe ioyile yendalo eqinisekisa ukukhuselwa kokufuma okusebenzayo kunye nokuthintela ukungcoliseka komngundo, iinkuni ze-teak zikwachaphazeleka ukuba zichaphazeleke yimichiza enemibala efana nedayi yeenwele, iityuwa zebhafu kunye nejeli yeshawa. Ezi zinto zirhabaxa zinokubeka esichengeni isibheno seteak.
Ngelixa umthi we-teak uhleli ixesha elide ngokumangalisayo, ukuba awunyangwa, ugqityiwe kwaye utywinwe kakuhle uyakudamba kwaye uphele ekugqibeleni.
Ukugcinwa komgangatho weshawa wokhuni lomthi we-teak kufuna isixa esifanelekileyo sexesha kunye nomzamo wokuqinisekisa ukuba bahlala bekhangeleka kakuhle. Ngelixa isibheno sokuyila kufanelekile kwiindleko zokuba nomgangatho weshawari wetay, unokufumana iindleko.
Nazi ezinye zeyona mibuzo ithandwayo ngokubhekisele kumgangatho weteak kwishower.
Nokuba umthi onzima awunakuhlala ixesha elide xa ubonakalisiwe emanzini aneleyo - kodwa, kuba iinkuni zetiak zineoyile yendalo eyinika uphawu lokuthintela ukungabinamanzi kwaye inokuchasana ngokungaqhelekanga ekubunjweni nasekungubeni kunezinye iinkuni ezininzi.
Ungalindela ukuba iinkuni ze-teak zihlale iminyaka eli-10 ukuya kweli-15 kwishower. Xa iinkuni ze-teak ziphathwa kwaye zigcinwa ngokufanelekileyo kwaye zisetyenziselwa ifanitshala yangaphandle inokuhlala iminyaka engama-50.
Zombini i-teak kunye ne-bamboo zikhetho oluhle kakhulu kwishawa ikakhulu kuba zombini zinokumelana kwamanzi okuphezulu; kodwa itiak ingaphatha amanzi ngcono kunoqalo.
Ukuba luhlobo lomthi onzima, itiak inombala omnyama kwaye obutofotofo ngakumbi kunoqalo kwaye ngenxa yokuba uqalo lukhaphukhaphu ngokobunzima, alunakho ukuphatha ubunzima obuninzi obuya kwenziwa yile teak.
I-bamboo ixabisa ngaphantsi kweenkuni ze-teak kwaye ke ihlala ihleli iyinto eyaziwayo kwizinto zokuhlamba, kuba i-bamboo ifikeleleka ngakumbi.
I-bamboo igcinakala ngakumbi kunemithi kuba ikhula msinya kwaye ayithambeki kangako ekulweni. Ngakolunye uhlangothi, ukusebenzisa i-teak kwisitya kuthathwa njengotyalo-mali olufanelekileyo kuba i-teak wood ingahlala iminyaka emininzi kwaye yanele ukufumana imali yakho.
Nokuba uyila, uhlaziya okanye wakha igumbi lokuhlambela, indawo yeshawari ifuna uqwalaselo olukhethekileyo kunye nokukhetha izinto ezifanelekileyo zomgangatho wokuhlamba kwizinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo yinto enkulu ekufuneka uyithathele ingqalelo.
Xa ukhetha indawo yokuhlambela efanelekileyo kwigumbi lokuhlambela lakho, khumbula ukuba imathiriyeli oyikhethileyo yokwenza imigangatho kufuneka ikwazi ukumelana nokufuma okungapheliyo kwigumbi lokuhlambela kwaye kumgangatho weshawari kufuneka uvalwe ngokupheleleyo.
Thathela ingqalelo uhlobo lomgangatho kunye nokukhululeka kulondolozo. Izinto zakho zomgangatho weshawari kufuneka zikwazi ukubamba uxinzelelo lokucoca rhoqo okusoloko kufuna ukusetyenziswa kweekhemikhali ezinobungozi kunye nezinto zokucoca ezirhabaxa; ukuze uyikhulule kwisikhunta, ukungunda kunye nesepha.
Cinga kakuhle rhoqo ukuphinda usebenze kwakhona kwaye uphinde ulungelelanise imigangatho yakho yeshawari. Amagumbi okuhlambela kufuneka asebenze, akhuseleke, acoceke kwaye akunike imvakalelo yokuphumla.
Imigangatho yokuhlambela nayo ifuna isibheno esibonakalayo esiya kuhamba kunye noyilo loyilo lwakho lokuhlambela. Kungenxa yokuba umgangatho weshawa kufuneka uhlale uqinile kwaye ubambe kakuhle, oko akuthethi ukuba akufuneki uqwalasele inkangeleko yobuhle kunye nendlela onokongeza ngayo kwindawo yokuhlambela.
imibuzo oza kuyibuza kwindawo yomtshato
Ukusuka kwindawo yozinzo lwe-ceramic kunye ne-porcelain tile zihlala zithathwa njengezona zinto zibalaseleyo kumgangatho wokuhlamba. Funda ngakumbi malunga Iithayile zangasese Apha.
Ezinye izinto ezithandwayo zomgangatho weshawari zibandakanya iithayile, imarble, ukhuni, iingqalutye, isileyiti, i-acrylic, iglasi yefayibha kunye nomgangatho wentsimbi odibeneyo.
Ukudibana ngakumbi iintlobo zeeshawari zangasese ndwendwela eli phepha.
ukuba ulahle njani amaqhuma eebikini
Ngubani umyeni wabaqeqeshi baseMeghan
Ubungakanani bomama weedilesi zomtshakazi
Izimvo zepati ye-bachelorette ngexesha le-covid
indlela yokunciphisa amaqhuma
izipho zokukhumbula abazali india